Hutsanana mukadzi: Parirenyatwa | Kwayedza
Hutsanana mukadzi: Parirenyatwa
09 Jun, 2014 - 15:06	 2014-06-09T15:42:25+00:00 2014-06-09T15:42:25+00:00 0 Views
GURUKOTA rezveutano nekurerwa kwevana, Dr David Parirenyatwa, vanoti vanhukadzi vane basa guru rekuona kuti mhuri iri kurarama munharaunda yakatsvinda sezvo izvi zvakakosha mukudzivirira zvirwere.
Vakataura mashoko aya svondo rapera kuMbare, muHarare, pagungano revanhukadzi pachirongwa chekuchengetedza hutsanana icho chaikotsverwa nekambani yeUnilever chinodadzwa kuti “Keeping healthy homes healthier”.
“Tinozviziva kubva nakare kuti musha mukadzi zvichireva kuti hutsanana hunotangwa kumba nanamai vachidzidzisawo vana zvichienda zvichidaro izvo zvinoita kuti tigare tiine utano hwakanaka,” vakadaro Dr Parirenyatwa.
Vakaenderera mberi vachiti kushaikwa kwemvura yemumapombi mumaguta nemadhorobha zvimwe zviri kukonzera kuti zvirwere zvemanyoka zvisapere nekuti vanhu vanopedzisira vave kushandisa mvura yemumatsime asina kuvakirirwa zvakanaka.
“Ndinofara kutaura nemadzimai ekuno kuMbare tichikurudzirana hutsanana hunova nhaka yedu kana tikahuchengetedza. Muna 2008, kuno kwakamboita zvirwere zvemanyoka zvakakonzerwa nekushaikwa kwemvura iro rinongova dambudziko kana nanhasi.
“Vamwe ndivo vava kushandisa mvura yemumatsime asina kuvakirwa zvinova zvinongotidzosera pakupararira kwezvirwere zvemanyoka,” vakadaro Dr Parirenyatwa.
Vakatenda Unilever nekuita zvirongwa zvekukurudzira madzimai hutsanana pamwe nekugadzira mishonga inouraya utachiona hunokonzera zvirwere.
Brand Manager weUnilever, Rufaro Masunda, akati sekambani, vanoda kuti mudzimai wese ave anogona kuchengetedza musha wake pamwe nemidziyo zvakashambidzika.